Iindaba-Ukusetyenziswa kwe-zeolite kulwakhiwo kumzi mveliso wokwakha
Ngenxa yobunzima bokukhanya kwe-zeolite, iiminerali zendalo ze-zeolite zisetyenziswe njengezinto zokwakha kangangamakhulu eminyaka. Okwangoku, i-zeolite luhlobo olutsha lwezinto ezinobungqongileyo, kwaye umzi mveliso ufumene izibonelelo zokusebenzisa umgangatho ophezulu / ucoceko lwe-zeolite ukuvelisa iimveliso ezongezwe ngexabiso. Izibonelelo zalo aziphelelanga kwimveliso yesamente, kodwa zikwasebenza nakwikhonkrithi, kumdaka, ekugreyiteni, kupeyinti, ukutyabeka, i-asphalt, iseramikhi, ukutyabeka kunye nokuncamathelisa.
1. Isamente, ikhonkrithi nolwakhiwo
Iminerali yendalo ye-zeolite luhlobo lwezinto ze-pozzolanic. Ngokwemigangatho yaseYurophu i-EN197-1, izinto zepozolanolan zihlelwa njengenye yezinto eziphambili zesamente. “Izinto zePozzolanic aziyi kuba lukhuni xa zixutywe namanzi, kodwa xa zicoleke emhlabeni kwaye kukho amanzi, ziyasabela ngeCa (OH) 2 kubushushu obuqhelekileyo bokuma ukuze zenze amandla okomelela kweCalcium silicate kunye ne calcium aluminate compounds. Ezi khompawundi ziyafana nemixube eyenziweyo ngexesha lokuqina kwezinto ze-hydraulic. Iipozsolans ikakhulu zenziwe nge-SiO2 kunye ne-Al2O3, kwaye ezinye ziqulathe i-Fe2O3 kunye nezinye i-oxides. Umlinganiselo we-calcium oxide esebenzayo esetyenziselwa ukuqina unokungahoywa. Umxholo wesilica esebenzayo awufanele ube ngaphantsi kwama-25.0% (ubunzima). ”
Iipropathi ze-pozzolanic kunye nomxholo ophezulu we-silica we-zeolite uphucula ukusebenza kwesamente. I-Zeolite isebenza njenge-stabilizer yokwandisa i-viscosity, ukufezekisa ukusebenza okungcono kunye nokuzinza, nokunciphisa ukuphendula kwe-alkali-silica. I-Zeolite inokuphucula ubunzima bekhonkrithi kunye nokuthintela ukwenziwa kweentanda. Ingena endaweni yesamente yasePortland kwaye isetyenziselwa ukuvelisa isamente yesalfath-resistant Portland.
Sisigcinakaliso sendalo. Ukongeza kwi-sulphate kunye nokumelana ne-corrosion, i-zeolite inokunciphisa umxholo we-chromium kwisamente kunye nekhonkrithi, ukuphucula ukumelana neekhemikhali kwizicelo zamanzi zetyuwa kunye nokumelana nokubola okungaphantsi kwamanzi. Ngokusebenzisa i-zeolite, isixa sesamente esongeziweyo sinokuncitshiswa ngaphandle kokuphelelwa ngamandla. Kuyanceda ukunciphisa iindleko zemveliso kunye nokunciphisa ukukhutshwa kwekhabhoni dayoksayidi ngexesha lenkqubo yemveliso
2. Iidyasi, iiringi kunye nezinto zokuncamathelisa
Idayi ye-ecological, ipeyinti kunye nezinto zokuncamathela ziya zithandwa ngakumbi mihla le. Iiminerali zendalo ze-zeolite sesinye sezongezo ezikhethiweyo zezi mveliso zendalo. Ukongeza i-zeolite kunokubonelela ngemveliso enobume bendalo kunye nokubonelela ngendawo esempilweni nekhuselekileyo. Ngenxa yamandla aphezulu otshintshiselwano nge-cation, i-zeolite-clinoptilolite inokuphelisa ngokulula ivumba kunye nokuphucula umgangatho womoya kwindalo esingqongileyo. I-Zeolite inobuhlobo obuphezulu bevumba, kwaye inokufumana iigesi ezininzi ezingathandekiyo, amavumba kunye namavumba, anje ngala: iisigarethi, ioyile yokuqhotsa, ukutya okubolileyo, i-ammonia, igesi yelindle, njl.
I-Zeolite yi-desiccant yendalo. Ubume bayo obukrwada buvumela ukuba bufumane ukuya kuthi ga kwiipesenti ezingama-50 ngokobunzima bamanzi. Iimveliso eziqulathe izongezo ze-zeolite zinokungunda okuphezulu komngundo. I-Zeolite ithintela ukubunjwa kwesikhunta kunye neebhaktheriya. Iphucula umgangatho wobume bendawo kunye nomoya.
I-Zeolite yi-aluminosilicate ene-hydrated kunye nesakhiwo esinamandla kakhulu. Kulula ukuhambisa amanzi kunye nokoma. Inezinto ezininzi eziluncedo zokuxuba i-asphalt efudumeleyo kumaqondo obushushu aphezulu: ukongezwa kwe-zeolite kunciphisa ubushushu obufunekayo kwi-asphalt paving; i-asphalt exutywe ne-zeolite ibonisa uzinzo oluphezulu olufunekayo kunye namandla aphezulu kumaqondo obushushu asezantsi; Gcina amandla ngokunciphisa ubushushu obufunekayo kwimveliso; ukunciphisa ukukhutshwa kwekhabhon diokside kwinkqubo yemveliso; ukuphelisa ivumba, umphunga kunye neeerosol.
Ngamafutshane, i-zeolite inesakhiwo esinamandla kunye notshintshiselwano nge-cation, kwaye inokusetyenziswa kwiiceramics, izitena, ii-insulators, izinto zokwenza imigangatho kunye nezinto zokwaleka. Njengento yokubambisa, i-zeolite inokunyusa ukomelela, ukuguquguquka kunye nokuqina kwemveliso, kwaye inokusebenza njengomqobo kubushushu kunye nokugquma kwesandi.
Ixesha Post: Jul-09-2021